पूँजीवादी विश्वव्यवस्थाले विकल्प खाेज्दैछ : डा. युवराज संग्रौला – Lokpati.com
मृत्यु केपी शर्मा ओली राशिफल नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड सरकार नेपाल प्रहरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री अपराध अमेरिका नेकपा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवन पक्राउ
पूँजीवादी विश्वव्यवस्थाले विकल्प खाेज्दैछ : डा. युवराज संग्रौला
By लाेकपाटी न्यूज On १२ चैत्र २०७६, बुधबार १९:१३
काठमाडौं। केही यथार्थता जो अहिले सिकिदैंछ, अब यी यथार्थका बारेमा सोच्नु पर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ। पुरातन विश्व व्यवस्थाले अब मानिसको संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो। हरारीको ‘होमो सेपियन्स’ पुस्तक पढेपछि, हामीले इतिहासलाई कुरुप बनाएका रहेछौं भन्ने लागेको छ। केही कुरा यहाँहरुसँग साझेदारी गरौं।
१. मैले स्कूल पढ्दा जब शिशु कक्षा सुरु भयो, एउटा लामो तख्तामा रातो माटो ढक्ढकाएर छेस्कोले लेख्ने शिकाइबाट पढाइ शुरु गरें। गुरुआमाले दिनभरी सँगै बसेर सिकांउनुहुथ्यो। म अगाडिका कक्षामा बढ्दै गंए, नेपालको इतिहास, भूगोल, ज्यामिती, अल्जेब्रा, नेपाली साहित्य, अंग्रेजी, नीतिशास्त्र, कानूनी ज्ञान सिकाउने श्रेस्ता, सबै कक्षामा थपिदैं गए। म नेपाल र विश्वका बारेमा थोरबहुत जान्ने मानिस भए। तर २०२८ सालमा त्यो शिक्षा अचानक नयाँ शिक्षाका नाममा आएको भाइरसले सिध्यायो।
त्यसपछि, नेपालको शिक्षा निरन्तर विदेशी योजनामा चल्यो। अहिले सम्म नेपाललाई दातृ संस्थाले २ सय ६८ अरब रुपैया सहयोग गरेछन र त्यसको २२ प्रतिशत शिक्षामा गएछ। तर हाम्रो शिक्षाको स्तर काहाँ छ ?
२. निरन्तर परिवर्तन प्रकृतिको नियम हो, र हामीले पनि परिवर्तनलाई स्वीकार्दै जानुपर्छ। तर फरक कुरा नै परिवर्तन भने हुंदैन। मैले सिकेको शिक्षामा नैतिकता थियो, विज्ञान पूरा थिएन होला। नैतिक शिक्षालाई कायम गर्दै, विज्ञान थप गर्नु पर्दथ्यो होला। नैतिकताका नाममा रहेका अन्धविस्वासलाई हटाउंदै, समाजलाई प्रगतिशील बनाउनु पर्दथ्यो होला।
तर हामीले देशको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, नैतिक शिक्षा र साहित्यलाई सफाया गरिदियौं। आज हामीसँग आफ्नो पहिचान छैन, हामी घोर स्वार्थी, उपभोक्तवादी, व्यक्तिवादी, अवसरवादी र अराजक भीडमा परिणत भएका छौँ।
मानिसका प्रवृत्ति हेर्दा हामी पढेका मानिस भएछौं, तर अशिक्षित र अज्ञानि पनि भएछौं। हाम्रो शिक्षा गलत रहेछ। यो विदेशी पैसा र योजनाको शिक्षाले हाम्रो सर्बनास गर्ने छ, शासकको बिचारधारा जेसुकै होस। यस्तो माहामारी रोगलाई नियन्त्रण गर्न घरमा बस्नुहोस् भन्दा नमान्ने नागरिकको यो मति वर्तमान शिक्षाको उत्पादन वा परिणाम हो भन्न नसक्नु पर्ने कारण छैन।
३. म गाउँमा पढ्थें। गाउँको स्कूल गाउँकै मानिस मिलि बनाएको राम्रो भवन थियो। खेलकुदका लागि मैदान थियो, खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा हुन्थे। स्कूल जब सम्म समुदायले चलाए, शिक्षामा भ्रष्टाचार थिएन। तर जब शिक्षा नीजिकरण मात्रै होइन व्यापारीकरण भयो, त्यसको परिणाम हाम्रो आँखा अगाडि छ।
बिगत तीन वर्षदेखि प्रत्येक साल ४५हजार विद्यार्थी विदेश गएका छ्न पढ्न। प्रत्यृक साल करिव ८० अरब रुपैयाँ कम्तीमा नेपाली आम्दानी विदेश गएको छ। हामीले टेक्सासमा बसेर टेकु अस्पतालमा कोरोनाले मानिस मेरेको हल्ला फिंजाउने युवा उत्पादन गरेछौं। हातमा ६० हजारको मोबाइल आमाबाबुको आम्दानीबाट किनेर बिहान नौ बजे उठेर देशमा अवसर छैन भन्ने युवाको जमात सानो छैन।
वर्तमान शिक्षाले देशप्रतिको जिम्मेवारी समाप्त पारेको रहेछ। जब मानिस आफ्नो परिवार, समाज, र देशप्रति गौरव नगर्ने ठाउँमा पुर्याइन्छ, त्यो समाजमा अराजकताको डर लाग्दो भाइरस लागेको हुन्छ, अनि त्यो कोरोनाबाट के तर्सिन्छ? हाम्रो शिक्षाले गुण होइन बैगुण शिकाएको रहेछ।
४. हाम्रा घरहरु अलि वरपर हुन्थे। गाइ बस्तुका गोठ अलि पर हुन्थे। पानीका धारा मुहानबाट आंउथे। रैथाने गाइ, भैंसी, बाख्रा, भेडा आदि थिए। नेपालमा पनि बिफर र दादुराको प्रकोप आयो। संसारमा अधिक मानिस त्यस ब्याधीबाट मरे। तर नेपालमा सिमित मानिस मात्र मरे। चीन र भारतमा पनि प्लेग आयो। तर नेपालमा त्यस ब्याधीले मानिस मरेका थिएनन्। त्यसका पछाडि कारणहरु रहेछ्न। हाम्रो बसोबास प्रणालीले सरुवा भाइरस रोक्दो रहेछ। बेलायती उपनिबेशले नेपालको जनसंख्यालाई उपनिबेस बनाएको थियो। सन् १९१४ देखि १९४५ सम्म हाम्रा आठ लाख मानिस युद्धमा प्रयोग ग¥यो। दस जनामा एकजना मात्र देश फर्किए। दुई विश्व युद्धमा दुइ लाख त मारिए नै। तर पनि हाम्रो जनसंख्या रोगले कहिल्यै घटेन। नेपालले बिनासक ब्याधी सामना गर्नु परेन।
५. के कारण थिए ?
पहिलो त हाम्रो बातावरण हो, जो अहिले डोजर आतंकको सामना गरिरहेको छ। हाम्रा बस्तीहरु, जहाँ घरहरु अलि वरपर थिए। हाम्रो अन्नबाली, तरकारी, सागपात र जडिबुटी हाम्रो शरीरलाई मिल्ने खालका थिए। जतिसुकै गरीबले पनि मकै, कोदो, स्थानीय धान, मस्याम, गहत, दाल र सागपात उत्पादन गरि खाने चलन थियो। २०२५ सालतिर बाट विदेशी विकासे बोका आए रैथाने बाख्रा सकिए। विकासे आएपछि रैथाने गाई, भैंसी, भेडा सबै सकिए। किन र कसरी सकिए ? आज गाउँहरु उजाड भए। हाम्रो विकासका योजना कसले बनाए ?
६. युभल नोह हरारी भन्छ्न, कृषि क्रान्ति भन्दा पहिलाका होमो सेपिएन्सले समाज निर्माण गरे। मिथकहरु निर्माण गरि मानिसलाई समूहमा राख्ने आधार निर्माण गरे, भाषा र सञ्चारका प्रणाली निर्माण गरे। चिन्तन र मन्थनको क्रान्तिद्वारा आजको आधुनिक विश्वको जग निर्माण गरे। उनिहरु दिनमा छ सात घण्टा खाना खोज्दथे। हरेक दिन फरक खाना खान्थे।उनिहरु समूहमा बसेर मनोरञ्जन गर्थे। उनिहरु खुसीसँग बांच्थे, भलै कतिबेला सिंहले मार्थ्यो थाह थिएन। तर हामीसँग कति समय छ, आराम गर्ने? हाम्रो खाना त कुर्कुरे भैसक्यो। ती आदिम मानिस अहिलेका मानिस भन्दा बलिया, अग्ला र तन्दुरुस्त थिए।
उनिहरुले गाइबस्तु पालेका थिएनन्, तेसैले ब्याधीहरुका शिकार भएनन्। जब मानिसले कृषि क्रान्ति गर्यो, उसले खाने कुरा सिमित भए। मानिसले गाइबस्तु पाले। ब्याधीले मानिस मर्न लागे। तर पनि उनिहरुसँग ब्याधीसङ्ग मुकाबिला गर्ने क्षमता थियोे र मानव जातीलाई मासिन दिएनन्। आजको कथित विकास औद्योगिक क्रान्ति पछाडिको पुँजीवादको देन हो। यसले विज्ञान त निर्माण गर्यो, तर मानिसले ७० हजार वर्ष देखि विकास गरेको मानव सभ्यता ध्वस्त पार्दै छैन?
७. मेरा हजुरबुबा र बाबुको जति बल र ज्ञान मसँग छैन। मेरा हजुरबुबालाई गाउँको मात्र होइन जिल्ला भरीका मानिसका बारेमा थाह थियो, जनावरका बारेमा थाह थियो, बिरुवाका बारेमा थाह थियो, पुर्खाका नाम थाह थियो, कुन कुन ठाउँमा बसाइ सर्दै यहाँ आइपुगेको हो भन्ने इतिहास थाह थियो, नेपालको इतिहास थाह थियो, कुलोखन्ने प्रविधि थाहा थियो। अहिले हामीलाई के थाह छ ? मेरा हजुरबुबाले औषधि नखाइ बांचें। हामी औषधिमा बांचिरहेका छौ। हामीसँग ठूलो बाटो छ, मोटर छ, अस्पताल छ। तर आज म अस्पताल गएँ भने डाक्टर डरांउछन्। विज्ञानले खोइ त युरोप र अमेरीका बचाएको ? मलाई मेरो विज्ञानप्रति आज भरोसा छैन।
८. के विज्ञानको दोष हो ? होइन, विज्ञानको दुरुपयोग समस्याका रुपमा आएको हो। युरोपले मानिसलाई जातका आधारमा विभाजीत गरेर, पुँजीवादी बर्गीएताको निर्माण गर्ने उपनिबेशको माध्यमले दुइसय वर्षको अधिनायकवाद नचलाएको भए, आजको दुनियाँ फरक हुने थियो। यो मेरो भनाइ होइन, पश्चिमलाई स्वर्ग देख्नेहरुलाई चित्त दुख्ला। यो इड्वार्ड सैडको भनाइ हो, उनी अमेरिकी हुन्। पश्चिमको अहंकार हो, भनी चोम्स्की भन्छ्न। हरारी पनि तेसै भन्छ्न। आज मानिस सभ्यताका नाममा असभ्य देखियो। युरोपको उपनिबेशि अधिनायकवाद नआएको हँुदो हो त कथित राष्ट्रियताको आन्दोलनले जन्म लिनु नै पर्ने थिएन।
आज दुनियाँ राष्ट्रियताले ओतप्रोत छ। युरोपलाई चीनको प्रभावको डर छ। युरोपलाई एसियाको डर छ। किन, एसियामा आज राष्ट्रियता मौलाएको छ ? कारण, हिजो युरोपले दबायो। असभ्य ठान्यो। एसियाको औद्योगिकरण ध्वस्त पा¥यो।
९. ठिकै छ, हिजो जे जे भयो। तर खोइ युरोपमा मानिस जोगाउने सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था आज ? धन जति मुठीभर मानिसमा रहेछ। त्यो धन गरीबलाई काम लाग्दो रहेनछ। देश धनी छ। तर सरकार गरीब छ। उद्योग धनी छ, तर उसको सामान विदेश जान्छ, देशलाई काम लाग्दैन। अमेरिकामा भेन्टिलेटर छैन। सबै उद्योगले अस्तिनै बेचीसकेछन। यीनै देशप्रति गैरजिम्मेवार पुँजीपतिसँग देशको अर्थतन्त्र छ।
१०. हामीले यहि ढांचा हो सिक्ने अब ? यस त्रासदीबाट सिकौं।
क. हामीले ठूला शहर बनाउनु नहुने रहेछ। स(साना थुप्रै शहर बनाउँ। शहरहरुलाई स्वावलम्बी बनाउँ।
ख. हामीले पहाड ध्वस्त पार्न नहुने रहेछ। पहाडमै र गाउमै बसोबास ठिक रहेछ। हामीले प्रकृतिसँग तालमेल गरेर बस्नु पर्ने रहेछ। हाम्रो विकासको ढांचा आधुनिकता र प्रकृतिसँको तालमेल रहेछ। अब देशको विकासको नयाँ ढांचाका बारेमा सोच्न थालौं।
ग. हिजो हाम्रो प्राङ्गारिकता कसले तोडिदियो? अब त्यस बाटोमा हिडौं। अब विदेश जान छोडौं। ब्याधी र दुःख त तेहि रहेछ। आंखिर देश नै चाहिने रहेछ। सबै युवाहरु, अब उत्पादनमा लागौं।
घ. नव उदारवादले ल्याएको उपभोक्तावादले सकेको रहेछ हामीलाइ। अब यसबाट बाहिर जाऔं।
यो ब्याधीपछाडि कसरी दुनियाँ आगाडि जाने होला ? किशोर माभुवानीले र लि कवान युले भने जस्तै पश्चिम आफ्नो अहंकार र एकाधिकारवादको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न तयार भयो भने, दुनियाँ राम्रो हुनेछ। अन्यथा हामीले अब फरक तरिकाले बाँच्न र समृद्ध हुन सिक्नु पर्छ।
घरबेटीले अप्ठ्यारो पारे पुलिसलाई खबर गर्नुस् : मन्त्री ज्ञवाली
कोभिड-१९ बाट बिरामीकाे मृत्यु कसरी हुन्छ ?